လမ်းပေါ်မှာနှင့်အိမ်တော်၌လှေကားအဘို့အကြွပ် - ခြေလှမ်းများပြီးသွား
လှေကားအဘို့အကြွပ် - စတိုင်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ option ကိုရှေးခယျြ
ဂရိတ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တိုးချဲ့ထားတဲ့, အ tile ကိုလှေကားအဘို့ကိုရွေးချယ်ရပါမည်။ သိရန်အရေးကြီးလှသည်ဖြစ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုအတူအများအပြားလူကြိုက်များမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ခုကိုအကောင့်သို့အလှဆင်လှေကားများ၏ကွဲပြားခြားနားသော features တွေယူရန်လိုအပ်ပေသည်။
Finish ကို tile ကိုလှေကား
ဆောက်လုပ်ရေး၏စင်မြင့်ကနေမျက်နှာပြင်ချောမွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်သေချာစေပါ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, တစ်ဦးအဆင့်ကိုသုံးပါ။
ဒါဟာထိန်းချုပ်မှုမှမဟုတျဘဲအလျားလိုက်တည်ရှိပါတယ်သောပစ္စည်း၏အစွန်းအထက်အဆုံးအုပ်ကြွပ်၏ဘေးထွက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကလှေကားရဲ့အဆုံးထပ်နေသည်ဒါကြောင့်ချစ်ပ်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်, အလျားလိုက်ထုတ်ကုန်ထားတော်မူ၏။
Finish ကို tile ကိုခြေလှမ်းများထိပ်ကနေစတင်ဆင်းရွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
လှေကားလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, tile ကိုသမားရိုးကျကော်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအထူးကော်ဖြေရှင်းချက်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကော် application ကိုအံသွားနဲ့ trowel ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ အစိုင်အခဲကိုပြုပြင်တာတွေဘို့အနေအထားအတွက်ရော်ဘာဆောက်ပုတ်နှင့်အတူခေါက်အကြံပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ယင်းအပေါ်ယံပိုင်း၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ဖို့တစ်ဦး elastic sealant နှင့်အတူအဆစ်ဆက်ဆံပါ။
installation ကိုကျင့်သောအကျင့်ကိုထုတ်တင်ဆောင်လာသောများအတွက်စံပြအပူချိန် - 20 ° C တို့
လှေကားများအတွက်အုပ်ကြွပ်အကြားအဆစ်များ၏အကောင်းဆုံးအကျယ်နှငျ့ ပတျသကျ. , က 3-4 မီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာဖို့လှေကားတန်းစီများအတွက်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အဲဒါကိုအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိရမည်ကြောင်းသိထားရန်အရေးကြီးပါသည်: ရေစုပ်ယူတဲ့အနိမ့်ကိန်းရှိ Non-စလစ် textured မျက်နှာပြင်ရှိသည်, တိုက်ရိုက်နေရောင်, နှင်းခဲ, မိုး, ဆီးနှင်းများနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများ၏ဆိုးကျိုးများကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်။ ပြင်ပလှေကားအဘို့အ tiles ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်နောက်ဆုံးမှအကြမ်းခံဖြစ်ရပါမည်။ ဝတ်ဘို့သုံးနိုင်တယ်: clinker, ကြွေထည်ပစ္စည်း, ခင်းနှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းကျောက်အုပ်ကြွပ်။
အိမျတျော၌ tile လှေကား
အခန်း၏တစ်ဦးတည်း-piece အဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်, သင်ဂရုတစိုက်လှေကားအဘို့အပါအဝင်ပစ္စည်းများပြီးသွားကိုရွေးချယ်ရပါမည်။ တစ်အိမ်မှာခြေလှမ်းအခင်းအဘို့အ tile တဦးတည်းအရောင်သို့မဟုတ်ဆနျ့ကငျြဘနိုင်ပါတယ်။ လှပသောပုံစံကိုဖန်တီးရန်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏ဒြပ်ပေါင်းများကိုမူလကြည့်။ ဒီ finish ကိုအန္တရာယ်မကင်းဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာသာမန်ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများကိုသုံးပါရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်သူမကအလျင်အမြန်, ဖျက်ပုံပျက်နေသော, အပူချိန်အပြောင်းအလဲများနှင့်ရန်လိုဓာတုပစ္စည်းမှဆိုးဆိုးရွားရွားဓါတ်ပြုပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတင်ပြအတွက် options ကိုရွေးပါ။
semicircular မုတ် built အိမ်တော်မျက်နှာစာ၏အတော်များများနှင့်မေးခွန်းကဒီမှာပေါ်ပေါက် - အဘယ်အရာကိုပစ္စည်း, ဤခြေလှမ်းများရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဘို့ရွေးရန်။ သငျသညျအုပ်ကြွပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသုံးနိုင်သည်သူတို့အောက်မှာဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ စနစ်တကျတပ်ဆင်မှုရှိသမျှတို့ကိုအဆင့်ဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်လျှင်မူကား, မရှုပ်ထွေးတာဝန် - tile ကိုလှေကားရင်ဆိုင်ခြင်း။ ဤခေါင်းစဉ်သည်အခြားခေါင်းစဉ်ပေးထားရပါမည် - တဲ့မြို့ပတ်ရထားဇာတ်စင်ဖန်တီးရန်ထုတ်ကုန်ဖြတ်ဖို့ဘယ်လို:
လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်း Tile ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။
တချို့ကညှပ်ကိုသုံးပါ, သို့သော်ဤအမှု၌အလိုရှိသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲကြောင်း, ပဲ့နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကုသမှု edge ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ဖို့ဒါ့အပြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ tool ကို ပို. ပို. သတ္တုအတွက်အသုံးပြုပေမယ့်သင်, အတုစကျင်ကျောက်များအတွက်ဘဲလေးကသမားယူနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်တဲ့ disk ကိုနှင့်အတူဘူဂေးရီးယားသင့်လျော်ကွေး element တွေကိုဖန်တီးရန်။ ထိုသို့သောကုသမှုကိုပိုမိုအချိန်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်မူမမှန်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။
သင်လိမ်လှေကားရဲ့နံရံဖျော်ဖြေဖို့ရှိပါကကြိုးစားရန်ရှိရပါလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကခဲအလှဆင်ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အဦများအဘို့အကြွပ်သုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။ လှေကားအများအပြားအလှည့်ယဇ်ပူဇော်ပစ္စည်းပမာဏကိုမှဖြတ်တောက်အုပ်ကြွပ် (အထကျဖျောပွထားသနည်းလမ်းများ) လုပ်ဆောင်သွားရန်ရှိသည်အဖြစ်အကြောင်းကို 15% တိုးနေသည်။ tile ခြေလှမ်းများပထမဦးဆုံးလှေကားအပေါ်ထားရှိပစ္စည်း, အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာပြုသေချာအောင်ဖို့ချုပ်ရိုးအကြောင်းကိုမေ့လျော့မပေး, ဆိုလိုသည်မှာဖြတ်ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့အပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘောင်များနှင့်သံလမ်းသတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့သောလှေကား, ပြီးဆုံးရန်, က options အမျိုးမျိုးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သဘာဝအသောကျောက်အုပ်ကြွပ်၏အထူးသဖြင့်လှပသောကြည့်။ ဒါဟာဒီဇိုင်းကိုကြော့ရှင်းပေးပြီးအတွင်းပိုင်းကောင်းတဲ့စေသည်။ အဆင့်ရင်ဆိုင်ခြင်း လှေကားထစ်အုပ်ကြွပ်အကြမ်းခံပစ္စည်းများရှောက်သွားရကြမည်: ကျောက်, သဲကျောက်, basalt နဲ့စကျင်ကျောက်။ ခြေလှမ်းများများအတွက် porous ပစ္စည်းမသင့်တော်ဖြစ်ကြသည်။
ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်လှေကားများ၏ tile, စက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုမှတည်ငြိမ်တဲ့အပူခံနိုင်ရည်နဲ့ရေယဉ်သတ္တိလည်းရှိတယ်။ အဓိကအားနည်းချက်များမြင့်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်၎င်း၏အထိုင်များပါဝင်သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးနွေးမျက်နှာပြင်ရှိပြီးဖြစ်သောအတုကျောက်သည်လည်း, အကြမ်းခံ, ပွန်းပဲ့ခံနိုင်ရည်အတွက်ပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သေးသောကြောင့်အရောင်များ၏ကျယ်ပြန့အတွက်ပေးအပ်သည်။
အဆိုပါအပေါ်ယံပိုင်းကလူဦးဒဏ်ရာရရှိရလဲမလုပ်ခဲ့ကြောင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်သင့်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွင်းအပြင်နှင့်အပြင်ဘက်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့လှေကားအဘို့အကြွပ်ချော်။
တန်ဖိုး 27 1054-4 သွားရည်ခံက ISO မှဖြစ်သင့်အထုပ် flexural ခွန်အားကိုစစ်ဆေးပါ။
ခြုံငုံအာရုံစိုက်, အရောင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရွေးချယ်ပါ မင်းမျိုး၏အတွင်းပိုင်း , ဒါမှမဟုတ် infield ။ မဟုတ်ရင်ရလဒ်ထူးဆန်းတဲ့ကြည့်ရှုမည်, အပေါငျးတို့သကြွပ်တူညီတဲ့အရောင်နဲ့အရွယ်အစားခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။ အဆိုပါအုပ်ကြွပ်အဘယ်သူမျှမချစ်ပ်, အက်ကြောင်းနှင့်ပွန်းစားခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ စစ်ဆေးမှုများစဉ်အတွင်းစာရေးနံပါတ်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနံပါတ်များကိုစစ်ဆေးပါ။
ဒါကြောင့်အပေါ်ထောင့်ခြေလှမ်းတွေများအတွက်အုပ်ကြွပ်, baseboards, အဲဒီမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးနှင့်ပါဝင်သည်ပေးသောလှေကား, ပြီးသွားများအတွက်မြေတပြင်လုံးအစုံရှိပါတယ်။ ဤသည်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူအနှောက်အယှက်မဖြစ်နိုင်သောစေသည်။
ဒါဟာမျက်နှာပြင် Non-စိမ်ကြောင်းကိုအရေးကြီးပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အထဲတွင်မြေမှုန့်ဆို့နေပါတယ်။ tiles ကဆေးကြောဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်သန့်ရှင်းခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်သင့်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိပြီးဖြစ်သောကြွေကြွေပြား၏လူကြိုက်များ။ မီးခုခံမြင့်မားအစွမ်းသတ္တိကိုအနိမ့်ရေစုပ်ယူမှုနှင့်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုအချက်: စင်မြင့်များတွင်ကြွေအုပ်ကြွပ်ကျယ်ပြန့်အားသာချက်များစာရင်းရှိပါတယ်။ ဤသည်အဆောက်အဦးပစ္စည်းတတ်နိုင်သည်နှင့်စတိုးဆိုင်ထဲမှာဒါမှအပေါ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အရွယ်အစား, အရောင်များနှင့်ကျယ်ပြန့်ကိုယ်စားပြုနေသည်။
လှေကားအဘို့အကြွပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမျှအဆိပ်အညစ်အကြေးကြောင်းသေချာစေရန်, အရည်အသွေး၏လက်မှတ်ကိုရည်ညွှန်းရန်အကြံပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်များကြောင့်သူတို့မလျော်ကန်သော installation နဲ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်အများစု၌ရှိကြ၏။ အရည်အသွေးနိမ့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူသည့်အခါပြဿနာများပျေါပေါကျနိုငျသညျ။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအားနည်းချက်များကိုတစ်ချောမျက်နှာပြင်, ကျွတ်ဆတ်အမှတ်ဝန်, အပူစီးကူးနှင့်တစ်ဦးအပြားမျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းပါဝင်သည်။
ပုံမှန်အတိုင်းအုပ်ကြွပ်မတူဘဲပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော clinker အုပ်ကြွပ်စေသည်ရာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာပစ်ခတ်ကိုတိုးချဲ့ထားတဲ့သမားရိုးကျရွှံ့ထဲကနေကိုဖန်ဆင်းတင်ပြအဆောက်အဦးပစ္စည်း။ အတော်များများကမြင့်မားသောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန် confuses ဒါပေမယ့်အားသာချက်တစ်ခုအမြောက်အများရှိခြင်း၏အခြေခံပေါ်မှာ, တရားမျှတသည်:
ထုတ်လုပ်သူရှည်လျားလှေကားများအတွက်သင့်လျော်သောအထူးခင်းပြားများထုတ်လုပ်ခြင်း, တည်စေပြီ။ ဒါဟာတဦးတည်းဘက်မှာလုံခြုံမှုနှင့် rounded ဘီဗဲလ်များအတွက်အရောင်အဆင်းမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ပြားလမ်းခင်း၏လှေကားကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အများပြည်သူအဆောက်အဦးများနှင့်သာမန်နေအိမ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအားနည်းချက်များမျက်နှာပြင်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ချောဖြစ်လာသည်နှင့်မှား mounting မျက်နှာပြင်မှာမညီမညာဖြစ်နေသောကျွံပေးနိုငျသောအမှန်စင်စစ်ပါဝင်သည်။ လှေကား tile ကိုများအတွက်လမ်းခင်းအားသာချက်များရှိပါတယ်:
စနစ်တကျကိုင်တင်သောလျှင်, သင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်မည်ကိုတစ်ဦးခိုင်, Hard-ဝတ်ထားလှေကားရ။
အလွန်လွယ်ကူစွာ, ပြားလမ်းခင်းနှင့်အတူစီတန်းလှေကား, ထိန်းသိမ်းပါနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်။
တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာဖို့ tile ကိုခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုသစ်ပင်ထက်ကျော်လွန်ကတည်းကပိုကလှေကားတန်းစီအသုံးပြုသည်။ သဘာဝပစ္စည်းချဉ်းကပ်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်သင်ကသစ်ပင်အောက်ရှိအုပ်ကြွပ်လှေကားကိုအလှဆင်နိုင်သောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဒီဇိုင်းစတိုင်များများအတွက်သင့်လျော်သောသောအလွန်ကြီးစွာသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သစ်သားကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအသောကျောက်ကျောက်တို့မှကြွေ, stoneware, clinker အုပ်ကြွပ်နှင့်ထုတ်ကုန်နိုင်ပါတယ်။
စင်မြင့်ပေါ်တွင် tiles - ကျောက်
သမားရိုးကျအုပ်ကြွပ်မှ Excellent ကအခြားရွေးချယ်စရာတူညီပစ္စည်းများကို၏လုပ်ပေမယ့်ပစ်ခတ်ရန် 1300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, / စင်တီမီတာ 450 ကီလိုဂရမ်၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖိအားမှာဖြစ်ပေါ်သော, ကြွေထည်ပစ္စည်းပါလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဒီနည်းလမ်းကိုနှင့်အတူရှည်လျားသောကျော်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်များအေးသောချောမျက်နှာပြင်, ပါဝင်သည်သော်လည်း, ပစ္စည်းစျေးကြီးသည်။ လှေကားအဘို့အထပ်အုပ်ကြွပ်အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်:
အဆိုပါပစ္စည်းကိုခံနိုင်ရည်ဝတ်ဆင်သည်နှင့်မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ သငျသညျပုံမှန်အစည်းအဝေးပန်းရံလုပ်ဆောင်ပါလျှင်, ပန်းရံပြီးတော့ 1 စတုရန်းမီတာလျှင်တရာအနည်းငယ်ကီလိုဂရမ်၏ဖိအားကိုဆီးတားနိုင်ပါလိမ့်။
ကြွေအုပ်ကြွပ်ကြော်နှင့်အက်ကြောင်း၏အသွင်အပြင်မှဖြစ်ပေါ်နိုင်မရှိကြပေ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဒီလှေကားလက်တွေ့ကျကျမမြင်ရတဲ့အစွန်းအထင်းထောင့်ကွက်, ဒါကြောင့်သင်ရုံသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်သုတ်သငျ့သညျ။
ဤသည် tile ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ချောမွေ့စွာအနားရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် clutch ချုပ်ရိုးတစ်နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပုံစံများနှင့်အတူပစ္စည်းများ DIY စတိုးဆိုင်များတွင်ကျယ်ပြန့်။
ပြုတ်ကျခြင်းနှင့်ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကို minimize လုပ်ဖို့ကမျက်နှာပြင်မဟုတ်တဲ့စလစ်ခြေလှမ်းများကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးပါသည်။ အိမျတျော၌သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်မှာခြေလှမ်းဘို့ tile တစ်ခု Matt, ဖွဲ့စည်းပုံ, ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်မျက်နှာပြင်ကွမျးတမျးနိုင်ပါသည်။ မိုးရွာရွာနှင်းကျနေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင်ချော်ဖို့မသကဲ့သို့ထို့အပြင်လမ်းများအတွက်, ထိုသို့သောအစအနရော်ဘာ, ရော်ဘာကော်ဇောများနှင့်လိပ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ပင် Self-ကော်တိပ်များ၏နံရံအဖြစ်, Anti-စလစ်အပေါ်ယံပိုင်းသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဧည့်ခန်းထဲမှာနံရံ - ဒီဇိုင်းအတွက်တောက်ပထိ
အင်္ဂတေ cornice မျက်နှာကျက်
အင်ျဂလိစတိုင်တှငျနထေိုငျ - စတိုင်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်၏အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်များ
ခေတ်မှီအကျီ - Fall-ဆောင်းရာသီ 2016-2017
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ - ကုသမှု
ခိုး "အော်စကာ" Marlon Brando လီယိုနာဒိုကိုတွေ့